COMESA : Nahazo sitraka noho ny fahaizany nitantana -
AccueilRaharaham-pirenenaCOMESA : Nahazo sitraka noho ny fahaizany nitantana
19/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny dimy taona nisian’ny krizy teto amin’ny firenena dia maro ny ezaka nataon’i Madagasikara tamin’ny famerenana indray ny tanjaky ny toe-karena malagasy. Tamin’ ireo asa maro notanterahina dia niverina tsikelikely indray ny fahatokisan’ireo mpiara- miombon’antoka teknika sy ara-bola. Noho izany ezaka notanterahina izany dia nahitana fisondrotany hatrany ny fandrosoana ara-toe-karena teto Madagasikara, izay azo lazaina ihany koa fa noho ny fisian’ny fitoniana politika no nahafahana nanao izany. Fepetra izay anisan’ny takian’ ireo mpamatsy vola ny fisian ny fitoniana , saingy nanampy betsaka an’i Madagasikara ihany koa izany tamin’ ny fampivoarana ny lafiny ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Mahalala tsara sady vavolombelon’ ny zava-misy amin’ ny maha zava-dehibe ny fipetrahan’ ny fitoniana rahateo ny filoham-pirenena malagasy sady filoha mpitarika ny COMESA Hery Rajaonarimampianina , dia nambarany nandritra ny kabariny fa “ ilaintsika firenena rehetra anatin’ ny COMESA ny manohana ny ezaka vita amin’ ny fametrahana ny fitoniana sy mamaha ny olan’ny tsy fifankahazoana izay mahatonga ny korontana. Noho izany raha tsy misy ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana, dia ho foana tanteraka ny nofinofintsika mikasika ny COMESA matanjaka sy Afrika mpandresy” hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Vokatr’izany dia niarahaba ireo firenena izay nahita vahaolana tamin’ ny fifandirana ny filoha Hery Rajaonarimampianina tahaka ny repoblika federaly demokratikan’ i Ethiopie sy Erythrée manoloana ny fanapahan-kevitr’izy ireo amin’ny fandravonana ny disadisa efa nisy nandritra ny 15 taona. Toraka izany ihany koa ny zava-nisy any Soudan izay efa samy nanaiky ny hametraka ny fitaovam-piadiana. Tsara tokoa ny manamarika noho izany fa ny fisian’ny disadisa eo amin’ ny firenena dia tsy ahafahana manatanteraka ilay fifanakalozana malalaka. “Andalana ny fanatanterahana ny vina hatramin’ ny 2063 : dia ny vahaolana amin’ ny samy afrikanina izany” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny fahaiza-mitantana nataon’ny filoha ihany koa dia hita taratra amin’ ny fidiran’i Tunisie sy Somalie anatin’ ny COMESA izay mahatonga ny isan’ny firenena mikambana ho 21.
Nambaran’ ny filoha malagasy hatrany ihany koa fa maro ireo tetikasa izay vita taorian’ ny fivorian’ny COMESA farany teo « faly ao nahita fa taorian’ ny fivoriambe farany teo dia samy nahavita antsakany sy andavany avokoa ny firenena tsirairay avy , ary izany dia fahombiazana ho an’ ny tsirairay , indrindra ny programa izay manamafy ny fanamafisana ny ara-toe-karena ». Tsy ny eto madagasikara ihany tokoa noho izany no manana ny tetikasa amin’ ny fampivoarana ny angovo fa dia manerana an’i Afrika raha izay resaka fotodrafitrasa fototra izay no resahina, ka tsy nihambahamba ny filoha malagasy nilaza ampahibemaso ny ezaka atao amin’ny lafiny angovo , « azo lazaina ohatra amin’izay resaka fanamafisana ny fotodrafitrasa ifotony izay ny ezaka amin’ ny fampivoarana ny indostria misehatra amin’ ny angovo ho an’ ny vahoakantsika » hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Mahakasika indray ny fifanarahan’ireo firenena momba ny fifanakalozana malalaka amin’ ny lafiny ara-barotra (zones de libre échange), dia nambaran’ ny filoham-pirenena malagasy sady filohan’ ny COMESA fa tsy afaka notanterahina izany noho ny fahavitsian’ ireo firenena izay nanatanteraka ny fanaovan-tsoniam-pifanarahana dia Egypte , Kenya ary Ouganda . Nambaran’ ny filoha malagasy tamin’ izany fa ilaina firenena 14 anatin’ ny COMESA vao hotanterahina ity fifanarahana amin’ ny fifanakalozana malakaka ity. Marihina fa ny 10 jona 2015 tany Charm El-Sheikh tany Egypta no notanterahina ny fanaovantsonian’ ny fanatanterahana ity fifanakalozana malalaka ity teo amin’ ny COMESA-EAC ary ny SADC, izay mamondrona firenena 26 sy mponina 720 tapitrisa, ary tsy hohadinoina ihany koa ny vokatra anatiny tsy voahodina mitentina 1500 lavitrisa Dolara amerikanina. Nifanarahana tamin’ izany moa hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa afaka tanterahina anatin’ ny fe- potoana 12 volana izany.
Ny alakamisy izao no hanomboka hitety ireo rafitra rehetra noheveriny fa tokony hametrahana ny fitoriany an’i Andry Rajoelina ny Hetsika ho Fanorenana Ifotony (HFI). « Maro loatra ireo harem-pirenena nahondran’ity filohan’ny Tetezamita teo aloha ity, ...Tohiny